Bariga Dhexe: Israaiil Isu Diyaarinaysa In Ay Weerarto Xarumaha Nukliyerka Iran? - Xogside-news
Home WARARKA CAALAMKA Bariga Dhexe: Israaiil isu diyaarinaysa in ay weerarto xarumaha Nukliyerka Iran?
Bariga Dhexe: Israaiil isu diyaarinaysa in ay weerarto xarumaha Nukliyerka Iran?
Taliyaha ciidamada Israaiil Afif Kokhafi ayaa guddiga xiriirka arrimaha dibadda iyo difaaca ee baarlamaanka u sheegay si looga baaqsado khatarta Nukliyerka ee suurtagalka ah ee Iran ka iman kara, ay ciidamadu sii kordhinayaan dadaallada ay ku qorsheynayaan weerarada xaruumaha Nukliyerka ee Iran lagu qaadayo.
Wargeyska afka dheer ee ‘Times of Israaiil‘ oo soo xiganaya Kokhafi ayaa sheegay in miisaaniyadda loo qoondeeyay gaashaan dhigga ay ciidamada awood u siin doonto inay ka jawaabaan hanjabaadaha kala duwan ee dhanka Iran ka imanaya.
Warbaahinta Israa’iil ayaa sheegaysa in hadalka taliyaha uu ku soo beegmayo xilli la filayo in ciidamada cirka ee Israa’iil ay dib u billaabaan tababarkii ay “ugu diyaar garoobi lahaayeen weerarka ay ku qaadayaan xaruumaha Nukliyerka ee Iran”.
Taliyaha guud ee ciidamada Israa’iil Afif Kokhafi ayaa bishii Janaayo ee la soo dhaafay ku dhawaaqay in uu amar ku bixiyay in ciidamadiisu ay sameeyaan qorshayaal suurgelin kara weerarrada lagu qadayo xaruumaha Nukliyerka ee Iran.
Kulan ay shalay yeesheen guddiga arrimaha dibadda iyo difaaca Israa’iil ayuu Kohafi sidoo kale u sheegay khatarta Isra’iil iyo waddamada kalaba ku soo wajahan.
Wuxuuna intaa ku daray in ay jireen howlgallo ka dhan ah waxa uu ku tilmaamay “cadawga bariga dhexe”, sanadkii la soo dhaafay, balse ma uusan faah faahin waxa uu cadawgaasi ula jeeday.
Wuxuuna ka digay in haddii maamulka Israa’iil loo hanjabo ay si xoog ah uga jawaabi doonto, haddii ay hanjabaaddaasi ka timaaddo marinka Qaza ama Waqooyiga.
3 qaab oo lagu weerari karo warshadaha nuclear-ka Iiraan
Previous articleSidee Ayaad u Noqon Kartaa Codkar Iyo Aftahan!
Next articleBasaaska Keim Iyo Taariikh Qorayaasha!